मिस नेपाल शरीर होइन बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने थलो : डा. निगता - Ganatantra Online
मिस नेपाल शरीर होइन बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने थलो : डा. निगता
१६ मङ्सिर २०७७, मङ्गलवार
घोराही, १६ मंसिर । मिस नेपाल २०२० को फाइनल चरणमा पुग्नुभएकी दाङकी चेली डा. निगताले मिस नेपाल बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने थलो भएको बताउनुभएको छ ।
विगतमा मिस नेपाल प्रति समाजमा नकरात्मक धारणा भए पनि अहिले क्रमशः सुधार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मिस नेपाललाई सुन्दरता वा शरीर पदर्शन भनेर बुझ्नु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मिस नेपालमा बौद्धिकता र क्षमताको मापन गरिन्छ,’ निगाताले भन्नुभयो, ‘म व्यक्तिगत रुपमा डाक्टर पेशामा आवद्ध छु, तर मिस नेपालमा सहभागि छु, यो एउटा प्लेट फर्म हो ।’
भविष्यमा छाला रोग विशेषज्ञ बन्ने आफ्नो लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले डाक्टरी पेसासँगै समाज सेवा गर्ने प्रतिकृया दिनुभयो । ‘अहिले नेपालमा एसीड आक्रमणमा पर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ, त्यसमा पनि छोरीहरु माथि बढी नै आक्रमण हुन्छ,’ डा. निगाताले भन्नुभयो, ‘म उनीहरुको उपचार दिएर पुर्नजन्म दिन चाहन्छु ।’
डा. निगाता पश्चिम नेपालबाट मिस नेपाल २०२० को फाइनल चरणमा एक्लो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । चितवन देखि पश्चिम क्षेत्रमा उहाँ मात्रै फाइनल चरणमा प्रवेश गर्न सफल हुनुभएको छ ।
अहिले पनि नेपाली समाजमा विभिन्न खाले विभेद र महिलाहरु माथि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै आँफू त्यसका विरुद्ध सशक्त भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘सुन्दर समाज निर्माणका लागि हामी सबैबिच सहकार्य हुन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समाज राम्रो बनाउने हामी आँफैले हो, कोही बाहिरबाट आएर हाम्रो समाज बनाउँदैन ।’ भविष्यमा समाज रुपान्तरणका लागि आँफू निरन्तर लागिरहने डा. केसीले बताउनुभयो ।
डा. निगातालाई जिताउनका लागि आइएमइ पे एपबाट भोट गर्न सकिने छ । त्यसका लागि कुनै पनि मोवाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोरमा गएर आइएमइ पे एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ । एप ओपन भएपछि इभेन्ट अप्सनमा गई उहाँलाई भोट गर्न सकिन्छ । त्यसपछि एप ओपन गरी प्रतिष्पर्धी नं ७ कि निगातालाई भोट गर्नुपर्ने छ ।
आँफूलाई जिताउन मंसिर १९ गते राति १२ बजेसम्म भोट गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेसम्म भोत गर्नुभएका सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै गर्न बाँकी महानुभावहरुलाई भोट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच डा. निगाता केसीलाई जिताउनका लागि दाङ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट जिताऔं अभियान शुरु गरिएको छ । दाङमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको संयोजकत्वमा जिताऔं अभियान शुरु गरिएको छ ।
संयोजक प्रियासनिले डा. निगाता हामी सबै पश्चिम नेपालका जनताको गौरव भएकाले विजय गराउन आआफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाम्रो सानो सहयोगले यस क्षेत्रकै इज्जत बढ्ने भएकाले डा. निगातालाई भोट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
डा. निगाताका बुवा विष्णु बहादुर केसीले आफ्नी छोरी डा. निगातलाई विजयी गराउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निगाता आफ्नी मात्रै नभएर सबै कि छोरी भएकाले हौसला प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।